Inona avy ireo biofuel cellulosic ary ahoana ny fomba famokarana azy ireo? Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Biofuel
Misy karazana biofuel isan-karazany avy amin'ny akora azo averina averina. Androany isika hiresaka biofuels cellulosic. Ity karazana solika ity dia avy amin'ny sisa tavela amin'ny fambolena, hazo ary ahitra izay maniry haingana izay azo ovaina ho karazana biofuel isan-karazany ao anatin'izany ny solika jet.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny biofuel cellulosic sy ny toetra mampiavaka azy ireo isika.
1 Inona avy ireo biofuel cellulosic
2 Fandanjana entona entona entona
3 Famokarana biofuel cellulosic
4 Fomba famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny biomass cellulosic
Inona avy ireo biofuel cellulosic
Ho an'ny fiarahamonina ankehitriny dia tokony hazava fa tsy maintsy mivoaka amin'ny sehatry ny solika isika. Ny fiankinan-doha amin'ity solika fôsily ity dia miteraka risika tsy azo leferina amin'ny fiarovana ny firenena, toekarena na tontolo iainana. Na izany aza, ny maodely ara-toekarena ankehitriny dia tsy mampiato ny fampiasana ireo lasantsy fosily. Raha te hahitana loharanom-baovao misy angovo azo havaozina dia ilaina ny mahita masoivoho vaovao afaka mitarika fiaramanidina manerantany satria ity no loharanom-pamokarana entona entona miteraka rivotra.
Azonao atao ny manala ny biofuel amin'ny zava-maniry na efa legioma. Ireo an'ny taranaka voalohany dia avy amin'ny biomassa azo hanina, indrindra ny katsaka sy ny soja, fary ary betiravy, sns. Izy ireo no voankazo akaiky kokoa any an'ala misy akora biofuel satria ny teknika ilaina izay ilaina hamoahana azy ireo no manjaka.
Tokony holazaina fa ireo biofuel ireo dia tsy vahaolana maharitra rehefa mandeha ny fotoana. Ilaina ny tany azo volena ary ny biofuel ihany no azo hamokarana ny 10% amin'ny filan'ny solika any amin'ny firenena mandroso indrindra. Amin'ny fangatahana voly lehibe kokoa, ny sakafon'ny biby fiompy dia lasa lafo kokoa sy amin'ny vidin'ny sakafo sasany, na dia tsy dia betsaka loatra na araka ny ninoan'ny gazety anao taona vitsivitsy lasa izay. Raha vantany vao kaonty ny fandefasana entona rehetra ao amin'ny biofuel voalohany, dia tsy mahasoa loatra ny tontolo iainana araka ny itiavantsika azy.
Fandanjana entona entona entona
Ity fihenan'ny fandanjana entona entona ao amin'ny habakabaka eo anelanelan'ny fandraisana sy ny fifandimbiasana ity dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fampiasana biofuel generasi faharoa izay azo avy amin'ny fitaovana cellulosic. Ireto fitaovana cellulosic ireto dia: sisan-kazo toy ny vovoka na habe amin'ny fananganana, fambolena toy ny tahon-katsaka sy mololo. Hitanay koa ny voly angovo, izany hoe ireo zavamaniry izay misy fitomboana haingana ary misy akora amin'ny entona na nafafy manokana hamokarana biofuel.
Ny tombony lehibe ananan'ireto vokatra angovo ireto dia ny vidiny vitsy mandritra ny famokarana azy ireo. Be dia be fotsiny ary tsy misy fiantraikany amin'ny famokarana sakafo, izay zava-dehibe indrindra tokony hojerena. Ny ankamaroan'ny voly angovo dia azo ambolena amin'ny tany marginal izay tsy ampiasaina amin'ny fambolena. Ny sasany amin'ireny zavamaniry wilow azo havaozina vetivety ireny dia afaka mandoto ny tany rehefa maniry.
Famokarana biofuel cellulosic
Biomassa be dia be no azo jinjaina amin'ny famokarana solika. Misy ny fanadihadiana sasany izay manamafy fa, farafaharatsiny, any Etazonia, farafahakeliny 1.200 tapitrisa taonina biomassa cellulosika maina azo vonoina isan-taona raha tsy mihena io biomassa misy hohanin'ny olombelona io, ny fiompiana ary ny fanondranana. Miaraka amin'ity maherin'ny 400.000 tapitrisa litatra ny biofuel azo isan-taona. Io vola io dia mitovy amin'ny antsasaky ny fanjifana lasantsy sy ny gazoala any Etazonia ankehitriny.
Ity biomassa niteraka ity dia azo ovaina ho karazana biofuel rehetra: etanol, lasantsy tsotra, gasoil ary na solika jet aza. Mora kokoa ny manisy voan-katsaka toy izay ny mamotipotika ireo tahon-selulose omena, saingy tato ho ato dia nisy ny fandrosoana lehibe. Ireo injeniera simika dia manana maodely solosaina simika matanjaka kuantum hananganana rafitra afaka mifehy ny fanehoan-kevitra amin'ny haavon'ny atômika. Ireo famotopotorana ireo dia natao hanitatra tsy ho ela ny teknikan'ny fiovam-po amin'ny sehatry ny fanadiovana. Ny fotoanan'ny solika cellulosika dia azontsika izao.
Rehefa dinihina tokoa, ny tanjona voajanahary amin'ny cellulose dia ny mamolavola ny firafitry ny zavamaniry. Ity firafitra ity dia misy scaffolds hentitra amin'ny molekiola mihidy izay manohana ny fitomboana mitsangana izay manohitra mafy ny fahasimban'ny biolojika. Mba hamoahana ny angovo misy ao amin'ny cellulose hamaha ny fatotra molekiola noforonin'ny fivoarana.
Fomba famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny biomass cellulosic
Ny fizotrany dia manomboka amin'ny fanaparitahana ny biomassa solid ho molekiola kely kokoa. Ireo molekiola ireo dia voadio bebe kokoa mba hanana solika. Ireo fomba dia mazàna no sokajina amin'ny maripana. Manana ireto fomba manaraka ireto izahay:
Ny fomba hafanana ambany: Ity fomba ity dia miasa miaraka amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 50 sy 200 degre ary mamokatra siramamy afaka manamboatra etanol sy solika hafa. Izany dia mitranga amin'ny fomba mitovy amin'ny fitsaboana ankehitriny ampiasaina amin'ny voly katsaka sy fary.
Ny fomba hafanana ambony: Ity fomba ity dia miasa amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 300 sy 600 degre ary misy menaka bio iray azo diovina hamokarana lasantsy na gazoala.
Ny fomba hafanana avo dia avo: Ity fomba ity dia miasa amin'ny mari-pana mihoatra ny 700 degre. Amin'ity fiasa ity dia miteraka gazy azo ovaina ho solika manondraka.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra izay ny fomba hamadika ny habetsaky ny angovo voatahiry avy amin'ny solika rano amin'ny vidiny ambany indrindra. Ny lalana samihafa dia mety tsy maintsy arahana amin'ny fitaovana biomass cellulosic isan-karazany. Fitsaboana ny ny mari-pana ambony dia mety tsara ho an'ny ala, fa ny mari-pana ambany kosa mety tsara amin'ny ahitra. Miankina amin'ny habetsaky ny fitaovana tsy maintsy ahena izany rehetra izany mba hamokarana ny biofuel.
Raha fintinina, ny cellulose dia voaforon'ny atôma karbonika, ôksizena ary hidrogen. Ny lasantsy, amin'ny lafiny iray, dia vita amin'ny karbonina sy hidrogen. Ny fanovana ny cellulose ho biofuel dia avy eo amin'ny fanesorana ny oxygen avy amin'ny cellulose hahazoana molekiola manana hakitroka avo lenta izay misy karbonina sy hidrôzenina fotsiny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny biofuel cellulosic ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » Biofuelels cellulosika
Mianara manamboatra fanaka
Ahoana ny fomba fanamboarana fresheners an-trano